GDmini2 - अल्ट्रासोनिक इनलाइन माइक्रो-रिएक्टर - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
GDmini2 अप्रत्यक्ष, तापमान नियंत्रित सोनिकेशन तरल मिडियाको लागि एक अल्ट्रासोनिक माइक्रो-रिएक्टर हो। अनुप्रयोगहरूमा समावेश छ: होमगेजिलाइजेसन, इमुलेशन, कण संश्लेषण, विलायक निकासी, सेल लिसिस र विच्छेदन।
GDmini2 एक अल्ट्रासोनिक homogenizer हो सीधा ग्लास ट्यूब को आकार मा। यसले homogenizes, disperses, कोशिकाहरु लाई बाधा गर्छन वा गिलास ट्यूब को माध्यम ले प्रवाह गर्ने तरल पदार्थ पाउँछ। यो एकल-पास वा पुनरुत्थान अल्ट्रासोनिक प्रसोधनको लागि इनलाइन रिएक्टरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सरल सेटअप & स्टार्टअप
तपाईंको प्रक्रिया सेटअपमा GDmini2 लाई एकीकृत गर्न
तपाईं एक नली को लागि ग्लास ट्यूब को प्रत्येक अन्त जोड्नुहोस र
यसको माध्यम ले आफ्नो सामाग्री पंप
नामित नली नलिकाहरूमा पानी जडान गर्नुहोस् (जस्तै शहरी पानी)
अल्ट्रासोनिक जनरेटरमा स्विच गर्नुहोस् – यो सरल छ
यो एक अद्वितीय र सजिलो उपयोग डिजाइन हो। ग्लास ट्यूबमा तीव्र अल्ट्रासोनिक कंपन युग्मन गरेर, ट्यूब पर्खालहरू अल्ट्रासोनिक रूपमा कम्पन गराउँदछ र यसैले ट्यूबको माध्यमबाट प्रवाह गर्ने तरलहरू निस्कन्छन्। यो धेरै अधिक तीव्र, वर्दी र संगत छ कि अल्ट्रासोनिक टैंक। र यसले लगातार इनलाइन काम गर्दछ – 24 घन्टा,7दिन हप्ता, 365 दिन एक वर्ष।
बुद्धिमान नियन्त्रणको साथ अल्ट्रासोनिक पावर
GDmini2 राज्य-को-कला द्वारा संचालित छ UP200St जेनरेटर (200 वाटहरू) त्यो स्वचालित आवृत्ति ट्यूनिंग, आयाम नियन्त्रण, टचस्क्रिन प्रयोगकर्ता इन्टरफेस, स्वचालित एसडी कार्ड प्रोटोकॉल (सीएसभी / एक्सेल), तापमान नियन्त्रण र धेरै अधिक संग सुसज्जित हुन्छ।
The UP200St-TD ट्राईड्युडर (200 वाट) तस्विरमा देखाइएको एक साँच्चै बहुमुखी इकाई हो, जुन GDmini2 भन्दा धेरै सेटअपहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ
एक कप सींग, उदाहरण को लागि साना सेन्टरफ्रेजुशेर विषाणुहरु को लागि
एक पूर्ण नमूना तयारी र खाने इकाई, उदाहरणको लागि कण आकारको विश्लेषणकर्ताको प्रयोगको लागि
रिएक्टर प्रवाह सेल वा सानो केन्द्राप्रवाह विषाणु को पुत्रीकरण को लागि
अप्रत्यक्ष, तापमान-नियन्त्रण सोनिक
GDmini2 डिजाइन ग्लास ट्यूब को आसपास एक resonating स्टेनलेस स्टील जैकेट मा शामिल छ। एक दबाइ युग्मन (सामान्यतया पानी) कम्पनले ग्लास ट्यूबमा पठाउँछ। एक निर्मित ब्याक दबाब वाल्व र एक जोडिएको दबाव स्विच कुशल अल्ट्रासोनिक को लागि सही युग्मन दबाव सुनिश्चित गर्दछ। युग्मन्ट ग्लास ट्यूबको वरिपरि तापमान नियन्त्रण (कूलेंट) को लागि प्रयोग गरिन्छ। यसैले, तपाईं प्रक्रिया तापमान सही रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। UP200St तापमान को निगरानी र प्रोटोकॉल, उदाहरण को लागि दस्तावेज को लागि।
Hi200cher GDmini2 UP200St-TD ट्रांजिस्टर (200 वाट) मा
गिलास ट्यूब तपाईको प्रक्रिया तरलको सम्पर्कमा एक मात्र सामग्री हो, Sonication प्रक्रिया पार-संदूषणबाट स्वतन्त्र छ। गिलास ट्यूब डिस्पोजेबल वस्तु हुन सक्छ, जुन सस्तो र सजीलोसँग परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यसले औषधि आर को लागि धेरै अनुकूल बनाउँछ&डी या विनिर्माण, ड्रग विकास वा विशेषता रसायन संश्लेषण। अक्सर, GDmini2 बाँझ प्रसोधनको लागि एक सिरिञ्ज पंपसँग जोडिएको छ। हामी अन्य सामाग्री को पाइलामाईड, पोलीथाइलिन, क्वार्ट्ज ग्लास, धातु या चीनी मिट्टी जस्तै बनाउन सक्छन्। तपाईं पनि आफ्नै ट्यूब स्रोत गर्न सक्नुहुनेछ। हामी उच्च प्रक्रिया संस्करणहरूमा upscaling को लागि विशेष अनुकूलन डिजाइन प्रदान गर्दछौं। कृपया हामीलाई जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्!
हेलसेस्टर अल्ट्रासोनिक माइक्रो-रिएक्टर
तपाईंको GDmini2 प्राप्त गर्नुहोस्!
GDmini2 सजिलै उपलब्ध छ र सामान्यतया हाम्रो गोदाममा स्टकमा। हामी सिफारिस गरिएका वस्तुहरूको लागि प्रस्ताव पठाउन खुशी हुनेछौं। कृपया हामीलाई सूचित गर्नुहोस्, हामी तपाईलाई कसरी सम्पर्क गर्नेछौं र तपाईंको आवेदनको बारे हामीलाई सूचित गर्दछौं, ताकि हामी तपाईंलाई थप सिफारिसहरू दिन सक्दछौं।